Kedu ihe Twitter na-eweta na ecommerce? | ECommerce ozi ọma
Kedu ihe Twitter na-eweta na ecommerce?
Ọ dịghị onye na-enwe obi abụọ na netwọkụ mmekọrịta abụrụla ngwa ọgụ dị ike nke ndị mmadụ na-esi enweta ma na -ekọrịta ozi. Mana ihe ụfọdụ ndị ọrụ na-amaghị bụ na ọrụ ndị a gụnyere ịkwado ọdịmma nke ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmahịa n'ịntanetị. Enwere ọtụtụ netwọkụ dị n'oge a, ma n'etiti ndị kachasị mkpa Facebook ma ọ bụ Instagram na kpomkwem ihe anyị ga-ekwu maka ya n'isiokwu a, nke bụ Twitter.
Twitter bụ netwọkụ mmekọrịta na-enye gị ohere izipu ozi ederede doro anya nke obere ogologo, yana opekata mpe mkpụrụ edemede 280 (nke izizi 140), akpọrọ tweets ma ọ bụ tweets, nke gosipụtara na ibe onye ọrụ. Ndị ọrụ nwere ike ịdenye aha na tweets nke ndị ọrụ ndị ọzọ na n'ọnọdụ ọ bụla ọ bụ ngwá ọrụ nwere ike ịbara uru nke ụlọ ọrụ azụmahịa dijitalụ.
Otu ihe kpatara eji ya maka ebumnuche ndị a bụ na ọ bụ otu n'ime netwọkụ nwere ọnụ ọgụgụ kachasị ukwuu nke ndị ọrụ n'ụwa. Gaghị echefu na Twitter ugbu a nwere nkezi nke karịa ndị ọrụ 300 nde. Nke a bụ ihe ị nwere ike iji mee ihe iji hụ na ecommerce gị na-abanye akụkụ buru ibu nke ọha mmadụ. Karịsịa na profaịlụ nke ndị ahịa gị ma ọ bụ ndị ọrụ gị na-eweta site na atụmatụ aghụghọ azụmaahịa nke anyị ga-akọwa n'isiokwu a.
1 Twitter na mmekọrịta ya na azụmahịa dijitalụ
2 Mara ebe o si bia
3 Dịkwuo mmasị na azụmahịa gị
4 Mee ka ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ na-arịwanye elu kwa ụbọchị
Twitter na mmekọrịta ya na azụmahịa dijitalụ
Obi abụọ adịghị ya, netwọkụ mmekọrịta ọha na eze a abụrụla ụzọ dị mfe, ngwa ngwa na nke kwụ ọtọ iji ruo ndị ahịa. Ka ewere gosi ahia gi, kamakwa iji gbasaa ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ isiokwu ị na-ere n'ịntanetị. N'echiche a, eziokwu ahụ bụ na ihe ọmụma dị n'ime ya adịghị arọ dị ka ọ dị na mgbasa ozi nkwukọrịta dijitalụ ndị ọzọ nwere ike inyere gị aka. Ruo n'ókè na ndị ọrụ nke usoro a, na-ele ya anya, nwere ike ịgụ otu tweet ma kpebie ma ha nwere mmasị na ọdịnaya ya. N'ihi nke a, ị ga-elezi anya n'ihe ọmụma ị na-ekpughe na usoro a.
N'aka nke ọzọ, ịnweghị ike ichefu na Twitter bụ ihu igwe mmekọrịta mmekọrịta na-adịghị ka ndị ọzọ. Nkwurịta okwu n'etiti ndị ọrụ na-adịwanye mmiri ma kwụ ọtọ, na nke a ọ nwere ike ịbara mmekọrịta dị n'etiti onye ahịa na ụlọ ọrụ ahụ uru. Site na usoro njirimara anyị na-ekpughe gị n'okpuru:
Ọ na - edozi akara azụmaahịa gị ka ọ ka mma ka ọha mara ya ma jiri ya kpọrọ ihe. Nwere ike ịga dịka ịchọrọ ma ruo afọ ole na ole gara aga ọ ga-adị ka ọ bụ enweghị ike ịchọta.
Onyinye ọzọ dị mkpa bụ na ị ga-akpọtụrụ otu ọwa nkwukọrịta mmekọrịta nke ọtụtụ ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ahịa na-eso. Ya mere, ị gaghị egbusi ike ya ịgakwuru ọtụtụ mmadụ site n'oge a.
O nwere ike inye gị ohere ịnweta mkparita uka na-ejighị ụzọ ntanetị ndị ọzọ nweta ihe ọmụma dị oke mkpa nke ị nwere ma na-efu gị otu euro. Yabụ na n'ụzọ a, ị nọ n'ọnọdụ iji bulie ọrụ ọ bụla ma ọ bụ mmegharị site na netwọkụ mmekọrịta a dị ike ma dị irè iji chebe ọdịmma azụmahịa gị n'ime ngalaba nke gị.
Mara ebe o si bia
Ọ bụrụ na ị ga - eji netwọkụ mmekọrịta a iji mezuo ebumnuche gị niile, ị kwesịrị ịma ihe dị iche iche. Omume ha abụghị otu ihe site na usoro mgbasa ozi ndị ọzọ ma ọ bụ nke usoro mgbasa ozi. N'echiche a, obere ndụmọdụ nwere ike ịba uru bụ na mgbe ị na-ere ngwaahịa na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ị nweghị ndekọ anụ ahụ nke ndị ahịa ebe ọ bụ na anyị enweghị ike ịhụ ha, yabụ ị ga-agba mbọ chọpụta ndị ha bụ n'ụzọ ndị ọzọ.
N'ezie, ị kwesịrị ịma, opekata mpe ntakịrị, ihe profaịlụ nke onye ahịa ma ọ bụ onye ọrụ dị ka ya. Ruo n'ókè ọ na-adịkarị irè gaa na ibe ndị ọzọ ịhụ ka ha si eme ya na twitter. Site na profaịlụ kachasị mma na netwọkụ mmekọrịta a na ị nwere ike ịlele n'enweghị nsogbu ọ bụla site ugbu a gaa n'ihu. Omume a nwere ike inye gị echiche ziri ezi banyere ihe ga-amasị ndị na-eso ụzọ gị, ọ ga - enyekwa gị ohere ịzọpụta ụfọdụ echiche okike nke asọmpi gị na nke na-arụ ọrụ na nke ahụ ruo ugbu a ị nwere ike ị tụleghị. Ọfọn, oge eruola itinye echiche a ka nsonaazụ ya ghara iwe ogologo oge.
Dịkwuo mmasị na azụmahịa gị
N'aka nke ọzọ, ọ nwere ike bụrụ na ọ bụrụ na ị dị ọhụrụ na Twitter ma ọ bụ na ị na-achọ iwulite ọnụnọ n'ịntanetị, ịkwesịrị ịmalite site n'inye ndị na-eso ụzọ gị ihe ha ga-eche na ha nwere njikọ na akara gị. Otu n'ime ndị kasị mma amụma ihu ọma mejupụtara retwe tweets na-atọ ụtọ nke ndị ahịa kachasị mma ma ọ bụ ndị ọrụ. Yabụ na n'ụzọ dị otú a, ị nọ n'ọnọdụ iji nyochaa ọnọdụ nke hashtag nke ọma ma n'ihi ọrụ a ị nwere ike ịhapụ onwe gị ịbanye ma rịọ ndị nwere ike iso gị site na mmekọrịta na-enweghị isi na ha.
Ọ bụ ụzọ bara uru iji nye visibiliti, ọ bụghị naanị maka akara azụmaahịa gị, kama ọ bụ na mgbakwunye na ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ isiokwu ị na-ere n'oge ahụ. Ruo n'ókè ọ na - emeziwanye ọnọdụ ahụ ebe ọ bụ na n'echiche a, ọ bụ usoro yiri nke ụdị akara nke, ka emechara, na-achọkarị itinye akara ya n'uche ndị ahịa. Ya mere na ozi gị na-anabata nnabata karịa nke mbụ.
Ihe ọzọ bara uru bụ ndị anyị ga - egosi gị n'okpuru ka ị nwee ike ịba uru n'oge a ma ọ bụrụ na ọ bụ oge dị mma iji tinye netwọkụ mmekọrịta dị mkpa:
Ọ na-enye gị ohere ịnweta ọtụtụ mmadụ karịa site na usoro ọ bụla ọzọ ma ọ bụ usoro ọdịnala.
Ọ na - ewepụta ọhụhụ karịa mgbasa ozi ndị ọzọ. N'echiche na ị gaghị echezọ na Twitter bụkwa netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta dị oke mkpa maka Google. Cheta ịkọwapụta nke gị tweet jiri mkpụrụokwu kachasị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka Google depụta profaịlụ gị ma nọrọ n'ọnọdụ kachasị elu nke igwe nyocha. E wezụga nke ahụ, ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji mepụta mgbasa ozi na mgbasa ozi Twitter iji mee ka visibilụ gị tweet.
Na-eme mkpọsa nke ụdị dị iche iche. Obi abụọ adịghị ya na site na netwọk mmekọrịta a nke mkpa pụrụ iche ị ga-anọ n'ọnọdụ iji mepụta mkpọsa na mmetụta mgbasa ozi dị ukwuu. Jiri ngwa iji họrọ usoro kachasị mma maka mkpọsa Twitter gị ma mepụta akụkọ ịgbaso. Na a kpọmkwem mmetụta na mmetụta na ị nwere ike ịmepụta na gị online ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmahịa site ugbu a.
Nnukwu ndị ahịa gị ma ọ bụ ndị ọrụ gị site n'oge ahụ. Ihe a niile maka nyocha ị nwere ike ịrịọ na iji ya Nchịkọta Twitter Na na ị nwekwara ike ịtụle akụkụ ndị dị mkpa, dịka mmekọrịta na ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ. Karịsịa, ọ bara ezigbo uru na ihe na-ezo aka na ọkara na ogologo oge n'ihi mmetụta dị mma ọ nwere maka iwulite ntụkwasị obi nke ụdị azụmaahịa site ugbu a.
Mee ka ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ na-arịwanye elu kwa ụbọchị
Mgbe n'aka nke ọzọ, ị gaghị echefu na netwọkụ mmekọrịta a na-enye anyị ohere nke mepụta netwọkụ nke ndị na-eso ụzọ nke ika anyi. Tụkwasị obi na ọdịnaya mara mma maka ndị ọrụ, anyị ga-enwe ike ịdọta ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ, wee nweta iguzosi ike n'ihe, na-eke na njedebe netwọkụ dị ike na nke na-egosi ndị na-eso ụzọ.
Ma na njedebe nke ụbọchị, ndị a bụ ụfọdụ n'ime uru nke netwọk mmekọrịta a dị ike nwere ike inye gị site ugbu a. Ọ bụ ezie na ịdebe ihe ịtụnanya ndị ọzọ maka njedebe, dị ka omume ndị na-esonụ anyị na-agwa ugbu a.
Have nwere nkwado dị mma nke netwọkụ mmekọrịta a mepụtara maka ndị ọrụ niile. Nwere ike iji ya na-enweghị ihe ọ bụla akụ na ụba na-eri gị n'akụkụ.
Ga-anọrọ ọtụtụ ndị mmadụ karịa ka ị na-eche na mbụ. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, nke a bụ usoro nke na-etinye gị na ọtụtụ ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ahịa.
Nwere ike ịmepụta netwọọdụ nke ndị na-eso ụzọ gị nke nta nke mere na ọhụhụ nke azụmahịa gị na-abawanye site na echiche niile.
N'ezie, ozi maka ndị ahịa chọrọ ọwa dị iche na nke ndị a ma ama na nke a nwere ike ịbụ otu n'ime ha.
Ọ bụ ọrụ a maara n'ụwa niile ma yabụ ị nwere ike ịdọta ndị ọbịa karịa site na mbido. N’atufughi ihe niile enyere gi n’efu. Ruo n'ókè na ọ ga-aba uru mbubata ha ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Kedu ihe Twitter na-eweta na ecommerce?
Ọrụ nke Social Media Manager na eCommerce
Ndụmọdụ iji chekwaa ego na mbupu